Fitaterana eto Afrika | Hery - Tsiky dia ampy
Ny momba ny fitaterana io tokoa mantsy no tena itovizan'i Italia amin'i Afrika, sy itovizan'ny Italiana amin'ny Afrikana. Eo amin'ny resaka hatsaran'ny fitaovana aloha, dia eto Italia angamba no anisan'ny misy fiaran-dalamby sy tram tranainy indrindra. Mifangaro eto tokoa aloha ny vaovao sy ny tranainy e. Angamba efa zatra an'ilay fisainana mpitahiry, ka tsy foy ny manary ny tena efa gola. Na koa angamba mariky ny fahantrana izany.
Eto Italia koa no nahitako fiaran-dalamby anisan'ny maloto indrindra. Mba efa hitako ihany ny fiaran-dalamby tany ambanivohitr'i Frantsa fa toa tsy misy itovizany.
Ny Italiana sy ny fanadihadiana nataony dia milaza fa mihoatra ny 60%-n'ny fitaterana an-dalamby no misy fahatarana mihoatra ny 5 minitra... dia toa efa zatra indray ny olona dia tsy miteny firy intsony. Omaly ohatra dia tara 40 min be izao ny fiara noraisiko. Isanandro izy tara 5 na 10 ka tsy dia maninona loatra fa ity indray mitoraka ity kosa dia efa be loatra... saingy mbola tsy maninona ihany ny ItaliAfrikana fa dia misisika tsara tahaka ny any Afrika.
Raha arak'ireo sary sy fanazavana ireo dia tia manao voyazy kosa anie izany ny Italianina e.
Momba ny fahatarana kosa dia angamba hoy aho hoe: sao kosa dia misy ifandraisany amin' ilay hoe: "izay mandeha mora no mandeha milamina, ary izay mandeha milamina no tonga alavitra" (Chi va piano va sano; chi va sano va lontano).
Mba vazivazy ihany ny ahy io, fa tena grave tokoa izany fiaran-dalam-by misy fahatarana izany. Ny any am-piasana tsinona tsy misy te-hahalala mihitsy fa rehefa tara dia iharan' ny fahatezeran' ny mpampiasa.
Nampidirin'i lehilahytsyresy @ 07:03, 2008-06-27 [Valio]
Nampidirin'i ikalamako @ 07:20, 2008-06-27 [Valio]
Nampidirin'i Lalasoa @ 08:21, 2008-06-27 [Valio]
tena mba te handeha @ io ry hery tsy haoko izay fahatarany any!
tena aty ary anie tsy misy fiaran-dalamby intsony e!
Nampidirin'i news2dago @ 12:52, 2008-06-27 [Valio]
hhmm tsy mba hoe grevy fa tonga dia hoe fahatarana lava hhmmmm tsy ho efan'ny mpanenjika ora izany kaleeh
Nampidirin'i sipagasy @ 15:19, 2008-07-02 [Valio]